Tapitra ny fe-potoana nomen’ny minisitera tompon’andraikitra ka hiroso amin’ny fandraisana fepetra manoloana ireo haino aman-jery tsy mahafeno fepetra amin’ny antontan-taratasy napetrak’ireo tompon’orinasa eo anivon’ny minisiteran’ny serasera sy ny kolontsaina. Tao anatin’ny dimy taona dia nirarakopana ny fananganana haino aman-jery teto Madagasikara ka tsy nisy intsony ny fijerena ny fenitra sy ny lamina tokony harahina. Momba ny fanarahana ny lalàna mifehy ny tontolon’ny fananganana haino aman-jery, nanamafy ny teo anivon’ny minisitera fa fanamby goavana ny manadio ny tontolon’ny haino aman-jery eto Madagasikara. Tsiahivina fa niisa 180 hatramin’ny omaly ireo onjam-peo sy fahitalavitra tonga nanao fanambarana momba ny antontan-taratasy eo am-pelatanan’izy ireo, teny anivon’ny minisiteran’ny serasera sy ny kolontsaina, ny 10 jolay lasa teo. Nilaza ny teo anivon`ny minisitera tompon’andraikitra fa raha misy tompona orinasan-tserasera tsy ara-dalàna ny fahitalavitra na koa ny onjam-peony dia tokony hampiato ny fandaharana misy ao aminy izy. Tsy hakatona kosa fa hampiatoana ny fandaharana misy aloha satria tsy mety raha tsy mitovy ny mpiantsehatra rehetra.